रोचक जानकारी – Page 8 – MeroJilla.com
शिक्षीका र बिद्यार्थीले यौन सम्पर्क गरेको खवर यसरी सार्वजनिक भयो Tuesday, January 16th, 2018
एजेन्सी । सेक्सको विषयलाई लिएर विश्वभर नै बेलाबेलामा विभिन्न काण्डले तहल्का मच्चाउने गर्छ । चाहे ति सेलिब्रेटी हुन् वा सामान्य । यस्तै एउटा काण्ड अहिले चर्चामा आएको छ । एक शिक्षिका प्लेनको ट्वाइलेटमा एक विद्यार्थीसँग सेक्स गरिरहेको अर्को काण्ड सार्वजनिक भएको छ । यो घटना हो इङ्ग्ल्याण्डको । २८ वर्षकी एलीनोर विल्सन फिजिक्सकी मास्टर हुन् । उनले प्लेनमा आफूले पढाउने..
आजसम्मकै सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि नेपाली बैज्ञानिकले पत्ता लगाए इबोला रोगको औषधि
काठमाडौं ०२ माघ । नेपाली युवा वैज्ञानिक सहभागी टोलीले संसारकै खतरनाक इबोला भाइरसको औषधी पत्ता लगाएको छ।अमेरिकाको जर्जिया राज्यको इन्स्च्यिूट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत नेपाली युवा वैज्ञानिक डा. सुदिप खड्का संलग्न टोलीले इबोलाको औषधी पत्ता लगाएको प्रतिष्ठित एन्टिभाइरल रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। अनुसन्धानमा ११ जना वैज्ञानिक टोली सहभागी थिए। ‘यो महत्वपूर्ण..
नग्न डाक्टर कहाँ विरामीको भीड Monday, January 15th, 2018
यी हुन् मनोचिकित्सक डाक्टर सारा ह्वाइट जो २४ बर्षकी छिन् । उनी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्छिन् । यी चिकित्सकको उपचार गर्ने तरिका एकदमै फरक छ । उनी नग्न भएर बिरामीको मनोभाव बुझेर उपचार गर्दछिन् । जसका कारण उनीसँग उपचार गराउनेहरूको ठूलो लाइन नै लाग्ने गर्दछ । उनले अस्पतालमा बोलाएर होइन अनलाईनबाट उपचार गर्ने गर्छिन् । उपचार गर्ने यस्तो विचित्र उपायको पछाडी साराको बेग्लै कारण छ..
सन्तान ७, उमेर ४३ उनी भन्छिन्, ‘पहिला भन्दा झन् सुन्दरी छु’ Sunday, January 14th, 2018
एजेन्सी ३० पुस । मानिसलाई आफ्नो उमेर ढल्कँदै गएपछि सुन्दरता बिग्रन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता हुन्छ । अझ सन्तानको आमा भएपछि सुन्दरता बिग्रने चिन्ताले महिला बढी पिरोलिन्छन् । तर सन्तान जन्माएर पनि स्वस्थ, सुन्दर रहन सकिने सुझाव दिएकी छन् जेसिका एंसलो । उनको इन्स्टाग्राममा पोष्ट भएका तस्बिरहरुले उनी कतै पनि ४३ वर्षकी र ७ सन्तानकी आमा भन्ने झल्को देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा..
बलिउड अभिनेत्री मल्लिकालाई कोठाभाडा तिर्न मुस्किल Friday, January 12th, 2018
दीपिकालाई जन्मदिनमा ह्रयान्ड पम्प उपहार Thursday, January 11th, 2018
काठमाडौं २७ पुस । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाई जन्मदिनमा उनका बंगालादेशी फ्यानले पानी तान्ने पम्प उपहार दिएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ । पानीको आभाव भएको एउटा गाउँमा ह्यान्ड पम्प जडान गरे उनका फ्यानले ‘दीपिका फ्यान क्लब’ लेखेका छन्..
धेरै सेक्सी भएपछि एक बर्ष फिल्म खेल्न रोक Tuesday, January 9th, 2018
एजेन्सी । एक कम्बोडियन नायिकालाई एक वर्षसम्म फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देशको संस्कृति मन्त्रालयले नै ‘धेरै सेक्सी’ भएको भन्दै उनलाई फिल्म खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । २४ वर्षीया नायिका डेनी क्वानले थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । नियम तोडेको भन्दै उनलाई संस्कृति मन्त्रालयले पुनः पाठ सिकाएपछि फिल्म खेल्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको हो । अन्य नायिकालेझै आफूले..
कैयौं हप्तासम्म आफ्नो मालिक्नीको शव कुर्ने बफादारी कुकुर Monday, January 8th, 2018
हंगेरी, पुस । आफ्नो मालिक्नीको प्राकृतिक मृत्यु भएको कैयौं हप्तासम्म शवलाई कुरेर बसेको एक कुकुरलाई निकै कमजोर अवस्थामा उद्धारकर्मीहरूले फेला पारेका छन् । हंगेरीको बुडापेस्टस्थित एक अपार्टमेन्टमा प्राकृतिक मृत्यु भएको ६० वर्षीया मालिक्नीको शवलाई कैयौं हप्तासम्म कुरेर बसेको हवानिज प्रजातिको ९ वर्षीय जाजा नाम गरेको कुकुरलाई कमजोर अवस्थामा उद्धारकर्मीहरूले फेला..
शिक्षाको मामलामा भने निकै पछि देखिए बलिउड अभिनेत्रीहरु, कसकाे को शिक्षा कति ? Thursday, January 4th, 2018
मुम्बई । बलिउडका अभिनेत्रीमा ट्यालेन्टको कुनै कमी छैन । स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो अभिनय मार्फत जादु चलाउन सफल देखिएका छन् तर शिक्षाको मामलामा भने निकै पछि देखिएका ती अभिनेत्रीहरुको आज चर्चा गर्न खोजिएको छ । काजोल: कजोलको अध्ययन सुनेर सबै हैरान हुन सक्छन् । उनले १२ पास पनि गरेकी छैनन् । १६ वर्षको उमेरमै उनले चलचित्र अभिनय थालेकी थिइन् । अभिनय थालेपछि उनले अध्यायनलाई..
२०१८ को पहिलो दिन कहाँ जन्मिए पहिलो शिशु ? आधा संख्या ९ मुलुकबाट Wednesday, January 3rd, 2018
ढाका, पुस । सन् २०१८ को पहिलो दिन विश्वभर जन्म लिने करिब ३ लाख ६ हजार शिशुमध्ये आधा संख्या विभिन्न नौ देशको रहेको यूनिसेफले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिकाको अधिकारका लागि कार्यरत संगठन (यूनिसेफ) ले सोमबार दिएको तथ्यांकअनुसार विश्वभर अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् जनवरी १ मा जन्मिने ३ लाख ६ हजार शिशुमध्ये बंगलादेशमा मात्र ८ हजार ३७० (२.१७ प्रतिशत) शिशु..
एक वर्षीया बालिका ‘स्नोबोर्ड’मा, अब साहसिक खेल ‘सर्फिङ’ खेल्ने (भिडियो) Tuesday, December 26th, 2017
काठमाडौं, ११ पौष । वर्षदिन नपुग्दै क्यास रोलीले आफ्नो आमाबुबाको प्रोत्साहनबाट साहसिक खेल ‘स्नोबोर्ड’ खेलेकी छन् । आफ्नो पहिलो जन्मदिन मनाउनु दुई दिनअघि गत शनिबार रोलीले बाइसस्थित बोगस बसिनको हिउँमाथि स्नोबोर्ड खेल खेलेकी हुन् । रोलीको आमाबाबु नीक र व्हेटनी रालीले उनलाई स्नोबोर्डमाथि चढाएर स्की खेलाउनका लागि आफ्नै घर वरीपरी स्नोबोर्डमाथि चढ्न सिकाएका थिए । एक वर्ष..